Yan Aung: ဘလော့ဂါတစ်ယောက်၏ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်…
ယနေ့မှစ၍ ကျွန်တော် စခန်းဝင်ပါတော့မည်. တရားစခန်းမဟုတ်သည်မှာကား Dead Sure. ဖြစ်၏. Intensive Study လုပ်ရန်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စခန်းသွင်းပါတော့မည်ဟု ဆိုလိုပါသည်. ယခင်က တစ်ရက်လျှင် ၂ ပို့စ် Average ရေးသားနေသော်လည်း ယခုတွင်မူ ရေးနိုင်မည် မဟုတ်တော့ပါ. အရေးကျဲပါတော့မည်. မည်မျှပင် အလုပ်ရှုပ်စေကာမူ ရယ်မောခြင်းတာဝန်ကိုတော့ ကျွန်တော် မပျက်ကွက်ပါ. ရယ်စရာမောစရာဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယုိုများတွေ့လျှင်တော့ မျှပါမည်. မတွေ့လျှင်လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဂစ်တာတီးရင်း ရယ်နေပါမည်….
စာအုပ်ကိစ္စ ဆက်သွယ်လိုသူများ Email ဖြင့်သာပို့ပါ. Chatting ထိုင်ခြင်းကိုလည်း နားပါပြီ. အမှန်ဆိုရလျှင် ကျွန်တော်ကားဟင်းလည်း ကောင်းကောင်းမချက် တတ်ပါ. ကိုယ်ချက်တတ်သလို ချက်ထားသည်များကို အပျော်သဘော ရေးသားတင်ဆက်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော့်ထက် အပုံကြီးချက်တတ်သူများ ရှိပါ၏. သို့သော် သူတို့တွင် ဘလော့ဂ်မရှိပါ. တစ်ချို့ကား ဘလော့ဂ်ရှိ၏. ဟင်းချက်နည်းအကြောင်းရေးရန် စိုးစဉ်းမျှ စိတ်မကူးကြပါ. အနှီ အကြောင်းပြချက်များကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ ပြီးစလွယ် ဟင်းချက်နည်းများကို သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းဖြစ်အောင် ရေးသားပြီး ကင်မရာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသာ ဖြစ်ချိမ့်၏။ ဖတ်သူများ ပျော်ရစေရန် ရည်ရွယ်၏။ သွားရည်ကျစေရန်လည်း ကြိုးစား၍ ဓာတ်ပုံများရိုက်ထား၏…
တစ်ချို့သောသူများကား ကျွန်တော်၏ ဖော်ရွေပျူဌာစွာ ချက်တင်းထိုင်ခြင်းကို နားလည်လက်ခံသော်လည်း တစ်ချို့သောသူများကား အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာ၍ သူတို့ကို ၀င်လုံးသည်ဟု ထင်မြင်ကောင်းထင်မြင်နိုင်၏. အားကြီးစိတ်မကောင်းပါ. ကျွန်တော်ဆင်ခြင်သင့်၏ဟူ၍သာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးရတော့၏…
ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်လုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိ၏ တိမ်မြုပ်နေသော အရည်အချင်းများကို လေ့လာစူးစမ်းသိရှိနိုင်ရန်နှင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း တိုးပွားစေရန်ဖြစ်၏. ထို့ကြောင့် မည်သို့ပင်အခက်အခဲများ ရှိလင့်ကစား အလုပ်ကိုပုံမှန်လုပ်မည်၊ စာကိုလည်း ပုံမှန်ရေးသွားမည်၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း များ ကိုလည်း တိုးချဲ့သွားမည်ကား ဧကန်အမှန်ပင်…
ကျွန်တော်သည် Blog Coding ပိုင်းများကိုလည်း သိပ်မသိပါ. CSS, HTML များကို Online တွင် ရှာဖွေဖတ်ရှုလျက်သာ လေ့လာဆည်းပူးနေခြင်းဖြစ်၏. သို့သော် ကျွန်တော် ၃ ခုသိလျှင် ၂ ခုကိုတော့ မျှပါ၏. ကျန်တစ်ခုကိုတော့ ပိုသိအောင် ကြိုးစားနေဆဲ ဖြစ်သောကြောင့် မမျှသေးခြင်းသာ ဖြစ်၏. ကျွန်တော့်တွင် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိ၏. မြန်မာလူငယ်များ ပညာတန်ခိုးဖြင့် တိုးတက်ထွန်းကားစေလို၏. ကျွန်ုပ်တို့၏ မျိုးဆက်တိုးတက်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ်မျိုးဆက်များ တိုးတက်မည် ဖြစ်၏. ကျွန်ုပ်တို့ ညံ့ဖျင်း ဖင့်နှေးနေလျှင်၊ သို့မဟုတ်. ကယ်တင်ရှင်ကို မျှော်နေလျှင် အချိန်ကားလင့်တော့မည်. သို့ဖြစ်၍ မိမိနှင့် စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများကို စည်းရုံးကာ ပညာသင်ဆုဖောင်ဒေးရှင်းကြီး တည်ထောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထား၏.
ကျွန်တော့်တွင် အသုံးများသော စကားသုံးခွန်းရှိပါသည်.
1. I’m sure.
2. It’s cool!
အနှီစကားသုံးခွန်းကို အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ သုံးစွဲသွားတတ်သည်မှာ ကျွန်တော်၏ ၀သီတစ်မျိုးပင် ဖြစ်၏. ယခုကြုံတွေ့နေရသော စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာ ကိစ္စတစ်ချို့တို့ကိုလည်း ထိုထိုစကားများဖြင့်သာ ကျော်လွှားသွားနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမည် ဖြစ်၏..
ဤကား ကျွန်တော်ပြောချင်သမျှ ကျွန်တော့်အကြောင်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသပင် ဖြစ်တော့၏… နောက်ဆက်တွဲများ အများကြီး ကျန်သေး၏. ပျင်းမည်စိုး သောကြောင့် ဤတွင် နားပြီ…
အဟိ.. စခန်းဝင်ချိန် ရောက်ပြီပေါ့။ ကျောင်းသားဘ၀...